Xoogag ka tirsan al-Shabaab oo weerar ku qaaday deegaanka Doynuunay… – Hagaag.com
Xoogag ka tirsan al-Shabaab oo weerar ku qaaday deegaanka Doynuunay…
Posted on 7 Juunyo 2018 by Admin in National // 0 Comments
Xoogaga ururka Al-Shabaab ayaa saakay aroortii la sheegay in ay Qarax ismiidaamin ah ku dhufteen Fariisan ay lahaayeen Ciidamada Dowlada islamarkasne dagaal kula wareegeen degaanka Doynuunaay, oo qiyaastii 26-KM u jira Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
Shabaabka ayaa dhanka Koonfureed ka galay deegaanka Doynuunay, iyagoona iska caabin kala kulmay Ciidamada Dowladda Soomaaliya, oo fariisimo ku leh labada cirif ee Doynuunay laga galo.
Shabaab war ay ku soo qoreen baraha ay wararkooda ku faafiyaan ayaa waxa ay ku sheegteen in ay dagaal kula wareegeen degaanka Doynuunay, waxayna tilmaameen in ay gacanta ku dhigeen Saanad Millitari oo ay lahaayeen Ciidanka dowladda ee halkaasi ku sugnaa.
“Kooxaha Shabaab ayaa weerar ku soo qaaday degaanka Doynuunay, waana laga war hayay, marka ay gudaha u galeen degaanka ayaa weerar lagu qaaday, dagaal ayaa socda, khasaaraha ilaa hadda lama oga, mana jiraan wax saanad ciidan ah oo ay la wareegeen.
Ilaa hadda si dhab ah looma oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkan, maadaama labada dhinac ay isku adeegsanayaan hubka nuucyadiisa kala duwan, balse saraakiisha Koonfur Galbeed waxay tilmaameen inay dib ka faah faahin doonaan.
Al-shabaab ayaa dhowr mar weerar ku qaaday degaanka Doynuunay oo ay ku sugan yihiin Ciidan Millitari ah iyo kuwa Koonfur Galbeed, waxayna arrintaasi dhibaato ku noqotay shacabka halkaasi degan, oo cabsi ka muujinaya weerarada Shabaab.